कस्ता खानेकुरा खाने त दम रोगीले ? – साँचो खबर
कस्ता खानेकुरा खाने त दम रोगीले ?
पुसको जाडो लागेसँगै दमका रोगीलाई निकै समस्या हुने गर्दछ । स्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग भएकाले चिसोमा दम रोगीलाई श्वास फेर्नमा कठिनाई हुने गर्छ ।
दमको समस्या भएकाहरु बिभिन्न औषधीको सहारा लिने गर्दछन् । तर यसको राम्रो परिणाम नहुन पनि सक्छ । तसर्थ आफ्नो खानपानलाई सुधारेमा मात्र दमको समस्यामा लाभ मिल्ने गर्दछ । त्यसो भए कस्ता खानेकुरा खाने त दम रोगीले ?
१) दम रोगीले एन्टिअक्सिडेन्ट र भिटा क्यारोटिनको राम्रो स्रोत मानिने ताजा फलको सेवन गर्नु पर्दछ । किवी र सुन्तला लगायतमा अत्यधिक मात्रामा भिटामिन सी र इ पाइन्छ । यस प्रकारका फलले फोक्सो सुन्निने तथा पोल्ने पनि कम हुन्छ ।
२) दमका रोगीहरुकालागि ताजा र हरियो पत्तेदार सागसब्जी समेत लाभदायक हुन्छ । यसमा हुने भिटामिन्स र फ्लेवोनाइड्सले शरीरमा मुक्त कणहरुलाई नष्ट गरिदिन्छ । यी मुक्त कण शरीरमा पाइने टक्सिस हुन्छन् जसले दमलाई अझै बढाउन सक्छ ।
३) दमका बिरामीलाई ड्राइ फुड्स उपायोगी हुन्छ । यसमा हुने म्याग्नेसियम र भिटामिनले फाइदा पुर्याउँछ । म्याग्नेसियमले दममा हुने घ्यारघ्यार कम गर्दछ भने भिटामिन ईले इम्युनिटी बढाउँछ ।
४) दमका निम्ति क्यालोरी र फ्याट कम भएको दालहरु लाभदायक हुन्छ । दालमा उच्च परिमाणमा फाइबर पाइन्छ जसले शरीरमा लिपिड्स र कोलस्ट्रोललाई कम गर्दछ । यसले श्वासप्रश्वासमा एलर्जी पैदा गर्ने बाहिरी कणहरुलाई रोक्छ ।
५) सर्दिनेस, साल्मोन र टुना जस्ता माछामा तथा विरुवाहरुमा पाइने केही पदार्थ जस्तै जैतुन र आलसको बिजमा ओमेगा ३ फ्याटी एसिड रहेको हुन्छ । यसलाई आफ्नो खानामा समावेश गरे दम रोगमा लाभ मिल्दछ ।
Previous: बिहीबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अन्तत: स्थगित
Next: वाटमोर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मूख्य प्रशिक्षक चयन